Mayelana ne-Dubai | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Yaziwa kabusha emhlabeni wonke njengendawo ekhulayo yokuhwebelana namazwe emisha, iDubai isibe ngenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi emhlabeni.
IDubai yidolobha elihle kakhulu elakha enye yezindiza eziyisikhombisa e-UAE.
IDubai ihlinzeka ngokuhehayo okumangalisayo njengeBurj Khalifa ekhazimulayo, isitolo ezitolo ezinkulu kanye nokuzijabulisa emadilini aphefumulelwa ukunambitheka okuvela emhlabeni wonke emahhotela we-7-star.
IDubai yidolobha elinabantu abaningi futhi elikhulu kunawo wonke e-UAE. Kunabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-2.7 abavela kwizizwe ezingama-200 abahlala kuleli dolobha. Izivakashi eziningi kanye nabahwebi bangena edolobheni behweba, noma bathokozise zonke ezinye izinsuku. IDubai ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokwenza ibhizinisi emhlabeni ngobuchwepheshe besifundazwe kanye nengqalasizinda, ukuhlala ngaphandle kwentela nendawo enhle yamasu enkabeni yezwekazi elikhulu lokuhweba. Ukuchuma okukhulu nobuningi obudlangile kuleli dolobha elisezingeni eliphezulu yisizathu sokuthi iDubai ingenye yezindawo ezihamba phambili zokuvakasha emhlabeni!
Umlando Omfushane waseDubai
Kujabha ukufudumala kwelanga ilanga unyaka wonke, ngamabhishi amangalisayo, izinkangala ezivusa amadlingozi, izindawo ezinkulu zokuthenga kanye namahhotela, izindawo ezinhle zamagugu kanye nomphakathi webhizinisi owandayo, iDolobha Ledolobha lizulazula ngezigidi zamabhizinisi nezivakashi eziziqabulayo minyaka yonke zivela emakhoneni ahlukahlukene Umhlaba.
Umndeni waseMaktoum kanye namalungu angama-800 esizwe sakwaBani Yas adala indawo yokuhlala ngasemfuleni ngo-1833. Lesi sikebhe kwakuyitheku elingokwemvelo, futhi kungekudala, iDubai yasuka yaba isikhungo sokuhweba, ukuloba nolwandle. Lapho kufika unyaka wamashumi amabili, idolobha seliphenduke ichweba elihle.
Imakethe noma i-souk ngesi-Arabhu, etholakala ku-Deira ohlangothini lwe-creel yayiyinkulu kulolu lugu, isebenza njengezitolo ezitolo ezingama-350 ezinokugeleza njalo kosomabhizinisi nezivakashi. Ngenkathi kutholwa uwoyela ngonyaka we-1966, uSheikh Rashid wasebenzisa imali etholakala emafutheni ukuze aqale ukuthuthukiswa kwengqalasizinda edolobheni.
Namuhla, iDubai isiphenduke idolobha eliqhenya ngobuciko bayo obumangalisayo, imicimbi yezemidlalo nokuzijabulisa esezingeni lomhlaba, kanye namahhotela angenakunqotshwa. Isibonelo esihle asikho esinye ngaphandle kwehhotela laseBurj Al Arab elimnandi elakhiwe ogwini lolwandle lwaseJumeirah. Leli yihhotela kuphela emhlabeni elinikeza insizakalo yezinkanyezi ezi-7. Kukhona ne-Emirates Towers, ephakathi kwezinhlaka eziningi ezizokukhumbuza ukuzethemba kwezentengiso edolobheni elikhula futhi lichume ngesilinganiso esivelele.
Imicimbi emikhulu yezemidlalo emhlabeni jikelele nayo isingathwa eDubai. Kukhona iDubai Desert Classic okuyisitobha esikhulu kuhambo lweProfessional Golf Association. Izinkulungwane zabavakashi minyaka yonke zidonswa emqhudelwaneni weNdebe Yomhlaba waseDubai, umjaho wamahhashi acebile womhlaba, umqhudelwano wamathenisi we-ATP, kanye neDubai Open.
IDubai iyisikhungo sebhizinisi esikhulu kunazo zonke esifundeni, futhi lokhu kungenxa yendawo yayo ephakathi nendawo, ebamba iqhaza elibalulekile ekubalulekeni kwayo kwezentengiso yamazwe omhlaba. Kodwa-ke, njengombuso wamaSulumane, kunemithetho ethile maqondana nokuhlangana nabasebenza nabobulili obuhlukile, okubandakanya ukungabanjwa ngesandla. Futhi, khumbula ukuthi amaSulumane athandaza amahlandla ezinhlanu nsuku zonke. Kodwa-ke, zivame ukuhamba zinganakwa ngabahambi bebhizinisi.
Ngenxa yendawo yayo enhle kakhulu, ukuxhumana okuphezulu kanye nezinsizakalo zebhizinisi ezihlanganisa konke, i-Dubai manje isiyindawo yokuhweba nesikhungo sezentengiselwano sonke. Uhulumeni uxhasa kahle amabhizinisi ngemithetho ebonakala kakhulu etholakala nomaphi esifundeni. Kukhona izindawo ezingakhokhiswa intela kuleli dolobha, izingqalasizinda ezisezingeni lomhlaba kanye nokufinyelela kubasebenzi abakhulayo abanamakhono nabanolwazi. IDubai inyuke yaba ngomunye wamazwe omnotho ohamba phambili emhlabeni wonke ngenxa yamanani aqashiwe okuqashwa, ukukhula okukhulu emalini etholwayo kanye nokwehlukahlukana kwamafutha.
Umnotho waseDubai ekuqaleni wawususelwa ekuthengisweni kwendabuko, kepha wathuthela emithonjeni yawo yemvelo ngasekupheleni kwekhulu lama-20, waba ngumnotho osuselwa ku-oyela. Kodwa-ke, imali etholakala kawoyela yahlanganiswa kancane kancane kwathi kamuva yacishe yathathelwa indawo ngumnotho oqhutshwa ngezinsizakalo ezenzelwe ulwazi.
Ukuzimisela kuka-Emirate ukuzibophezela ekufezekiseni izwe lanamuhla elinamaphayona kwezobuchwepheshe nokwakha izinto ezintsha yingakho kunikezwe uxhaso oluphelele kumabhizinisi asungula izinto zakwamanye amazwe abheke ukuzisungula eDubai.
Ngaphezu kwe-90% yomsebenzi webhizinisi e-Emirate namuhla kufaka phakathi ukuhweba, insizakalo yezimali, ukungena kwempahla, izihambi kanye nezokuvakasha, indawo ethengiswayo kanye nokwakhiwa, manje okwakha ama-90% omsebenzi webhizinisi e-Emirate.
Kanye nendawo yayo yamasu, ingqalasizinda esezingeni lomhlaba, lula ukwenza ibhizinisi, kanye nalokhu kwehlukahlukana, iDubai iyindlela engokwemvelo yezinhlangano zasekhaya nezamazwe omhlaba ezifuna ukuqala ukusebenza noma ukunwebeka eMiddle East.
Noma kungenzeka ukuthi ukwenyuka kwesibhakabhaka eDubai kukhuphuke ngesivinini esikhulu, manje leli dolobha selisungulwe njengendawo yokuqala eMiddle East yokwenzela izinhloko zezinhlangano zamazwe ahlukahlukene. Idumela lomhlaba wonke njengendawo eqinile yokutshala imali kanye nomakhi wokukhiqiza umnotho liyaqhubeka nokuqhubekisela phambili ukukhula kwedolobha futhi lihehe zombili izinkampani zomhlaba wonke nama-SME aphesheya.
Isiko Nendlela Yokuphila
IDubai inegugu lesiko lama-Arabhu elicebile. Yize manje kungukuhlanganiswa kwehlane, amabhishi nokudla okwenziwe ngumuntu, isiko labantu base-Emirati lisagcwele kakhulu. IDubai iyinkosi ephelele futhi ibuswa ngumndeni wakwa-Al Maktoum kusukela ngonyaka we-1833. Yize impilo eDubai isekelwa yisiko namasiko, i-UAE iyindawo efudumele yezihambi.
Amagugu amaSulumane ama-Emirati agcinwe, kanti iningi lingamaSulumane, kepha abantu bomdabu babekezelela kakhulu abanye amasiko nabantu abanezinkolelo ezahlukile kwezenkolo. Ngenxa yalokhu, iDubai iyikhaya lezizwe ezingaphezu kwama-200. Ngaphesheya komuzi ophithizelayo kukhona zokudlela nezindawo zokudlela ezi-6000 ezingaphezulu kuka-XNUMX ezihlinzeka ngokudla okuvela kuwo wonke amagumbi ezwekazi.
Enye yezinto eziningi ezikhangayo eDubai kubandakanya izinketho zayo zokuthenga. Kuyisibalo esisheshayo kubo bonke abathengi bendawo nabangaphandle ngenxa yokuthenga kwamahhala okungenziwa abantu. Uzothola izitolo ezinkulu nezinkulu ezinikeza isipiliyoni sokugcina ekuthengeni okunethezeka, kepha uma ungumzingeli wezingxoxo ofuna ukuthenga okungcono ngamanani aphansi kakhulu, khona-ke imibuthano edumile yaseDubai ikusibekele.
Kukhona okuthile okukuso esivakashi ngasinye, kusuka ezingutsheni zokugqoka kuya ezikhumbuzweni, amagajethi, izibiliboco zasendaweni nokunye okuningi. Ezinye zezindawo ezinhle kakhulu zokuthenga yi-The Dubai Mall, Wafi Mall, Mall of the Emirates, Deira Gold Souk, Global Village, Burjuman Center, Souk Madinat Jumeirah. futhi nokuningi.
Izimpawu zomhlaba eDubai
I-Dubai iyikhaya elikhangayo elimangazayo namaphrojekthi wezakhiwo onesibindi aguqule isimo sedolobha nesibhakabhaka. Ezinye zezimpawu zomhlaba zigcina udumo lokuba ngezinye zezimangaliso ezinde kakhulu, ezinkulu kakhulu futhi ezinhle kakhulu emhlabeni. Ezinye zalezi zimpawu ezizwakalayo zifaka i-Burj Khalifa; isakhiwo esikhulu kunazo zonke esenziwe ngumuntu emhlabeni ngamamitha angama -828. Ngenye yezindawo eziheha kakhulu eMiddle-East futhi kuye kwabizwa ngokuthi iJeel of Dubai.
Palm Jumeirah; isiqhingi esenziwe umuntu, esingenye yeziqhingi ezintathu ezihleliwe zePalm Islands nezakamuva ohlwini olude lwezinto ezikhangayo. Lesi siqhingi sihlinzeka ngemicimbi eminingi izivakashi ezingazingena kuyo. Lokhu kufaka phakathi izitolo ezinkulu emakethe emahhotela, izindawo zokuphumula zamabhishi okunethezeka, nokuningi, i-Al Sahra Desert Resort ihlala ngqo enkabeni yezindunduma ezinokuthula futhi inikezela okuhlangenwe nakho okuhle kwemisebenzi ogwadule.
I-resort ibamba zonke izinhlobo zemicimbi yangasese nemikhosi futhi ihlinzeka ngezinketho eziningana zokudlela, ihhotela le-Bur-Al Arab lase-7-izinkanyezi; okuyihhotela lesine elide kunawo wonke emhlabeni elinikeza okungcono kakhulu kunethezeka. Leli hhotela liyingcweti yobuciko bokwakha elingalinganiswa nanoma yisiphi esinye isakhiwo emhlabeni.
Imithombo yaseDubai; elinamandla okufafaza amalitha angaphezu kuka-22,000 amanzi emoyeni kuze kube yizinyawo ezingama-902 ubude futhi likhanyiswa ngamalambu ayi-6,600 nabahlinzeki bemibala abangama-25, nabanye abaningi.
Izindawo zokudlela ezihamba phambili e-Dubai
Ukusuka ekuthuleni okungapheli kwasogwadule kuya ekuphaphalazeni okumnandi kwesouk, iDubai inikezela izivakashi zayo nge-kaleidoscope ehehayo.
Naphezu kwendawo yayo encane, kunenqwaba yama-sceneries ongawathola emirate. Ngosuku nje olulodwa, izivakashi zizokwazi ukubona yonke into enhle, kusukela ezinkulwini zezihlabathi ezinwebekayo nezintaba ezimazombezombe kuya kumapaki aluhlaza namabhishi anesihlabathi, ukusuka ezifundeni ezihlubukayo kuya emizaneni enothuli, nokusuka ezitolo ezinkulu zasendulo ukuya ezitolo ezinkulu amakhaya aqedwa ngemibhoshongo.
I-emirate iwukubaleka okubuyiselwe emuva kwabavakashi kanye nesikhungo sebhizinisi esinamandla ngasikhathi sinye. Leli idolobha lapho ubulula beminyaka edlule buhambisana nobucayi bekhulu lama-21. Futhi ngenxa yalokhu kuqhathanisa, lokhu kunikeza idolobha laseDubai uhlobo lomuntu onomusa nokunambitheka, umphakathi ohlangana nabantu oziqhenya ngempilo yomhlaba wonke.
Ungayishintsha kanjani inombolo yeselula ebhaliswe ne-ID yakho ye-Emirates e-Dubai/UAE